စတိုင်လ်ပန်းချီကားများဖြင့်သင်၏အိမ်ကိုအလှဆင်ရန်စိတ်ကူးများကိုသတိပြုပါ။ အ | Bezzia
မာရီယာ vazquez | | အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ
ရှုခင်းများ၊ ပုံတူများနှင့်မြင်ကွင်းများကိုယေဘုယျအားဖြင့်ရွှေဖြင့်ဘောင်ခတ်ထားသည်။ ယနေ့ Bezzia တွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကြံဥာဏ်များကိုအဆိုပြုသည် သင်၏အိမ်ကို vintage လေးဖြင့်အလှဆင်ပါမရ။ ထူးခြားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပေးသောပန်းချီကားများကိုသင်မတူညီသောအခန်းများတွင်မတူညီသောသီကုံးမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
မင်းအိမ်မှာပန်းချီကားဟောင်းတွေရှိလား၊ မင်းအိမ်ကိုအလှဆင်ဖို့ဘယ်လိုသုံးရမှန်းမသိဘူးလား။ မင်းအနုပညာကိုကြိုက်တယ်၊ မင်းရဲ့ပန်းချီကားတွေကိုဧည့်ခန်းဒါမှမဟုတ်ထမင်းစားခန်းမှာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ပြဖို့စိတ်ကူးရှိလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောနေကြသည် သူတို့ကိုထားဖို့ပိုကောင်းတဲ့နေရာတွေ
ပန်းချီကားများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်များရှိငါတို့၏အိမ်နံရံများကိုအသက်ပေးရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ပြီးတော့သူတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုပါ နေရာတစ်ခုကိုအာရုံစိုက်ပါ အခန်းထဲက ဒါပေမယ့်အဲဒီနေရာတွေကဘာလဲ။
ဆိုဖာအထက်နံရံနေရာကတစ်ခုခုကိုအမြဲတောင်းနေပုံရတယ်၊ ပန်းချီကားတွေကအဲဒါကိုဖြေဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ သီကုံးမှုအမျိုးအစားအားလုံးမဟုတ်သော်လည်းသင်၏ဆိုဖာပေါ်တွင်တူညီစွာအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ ရှည်လျားသောဆိုဖာတစ်ခုပေါ်တွင်စတိုင်ကျသောအလှအပနှင့်အံ့သြဖွယ်ရာတစ်ခု asymmetrical vintage plaid ဖွဲ့စည်းမှုမရ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ခေတ်မီဆိုဖာတစ်ခုတွင် symmetrical သို့မဟုတ် square ဖွဲ့စည်းမှုသည်ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မည်။ ကိစ္စနှစ်ခုလုံးတွင်စံပြဖွဲ့စည်းမှုမှာဆိုဖာ၏အရှည်ထက်များစွာမပိုပေ။
သင်အကြိုက်ဆုံးပန်းချီကားများကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ သို့သော်သတိအရှိဆုံးသည်အချို့သောပန်းချီကားများနှင့် တွဲ၍ လောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသောဘုံဒြပ်စင် တစ်ခုလုံးအတွက် ဤဒြပ်စင်ကို motif (ပုံတူ၊ ရှုခင်း၊ ပန်းများ၊ သက်ရှိများ) သို့မဟုတ်ပန်းချီအရောင်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
ထမင်းစားခန်း၏နံရံတွင်စားပွဲ၏ရှေ့နံရံ၌ရှိသောပုံများသည်အလွန်တွေ့ရများသည်။ ဆိုဖာပေါ်ရှိအစုံများနှင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောဤစံပြဆန့်ကျင်ဘက်အချက်မှာ၎င်းတို့သည်စားပွဲဝိုင်းထက်တွင်ကျယ်သည် နံရံတစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းရန်.
ဤအရာအတွက်သင်သိရန်ပုံများစွာလိုအပ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်သင့်မှာလုံလောက်မှုမရှိရင်အလှဆင်စတိုးဆိုင်တွေကိုတစ်ပတ်ရစ်ပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်ရှေးဟောင်းရောင်းဝယ်သူတွေနဲ့စတင်လိုက်ပါ။ သူတို့ကကျေးလက်သစ်သားစားပွဲတစ်ခုရဲ့ဘေးမှာ၊ ဒါပေမယ့်ပိုပြီးခေတ်မီတဲ့အဖြူရောင်တစ်လုံးနဲ့ဘေးမှာရှိလိမ့်မယ် သစ်သားကုလားထိုင်များ (သို့) အမြောက်များပါ ၀ င်သောပစ္စည်းများ.
မီးလင်းဖိုသည်ပန်းချီဆွဲရန်ဂန္ထဝင်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ နံရံပေါ်မှာဗဟိုပြုထားတဲ့ရှေးဟောင်းပန်းချီကားတွေကိုသင်ဆွဲထားနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ထင်တာကပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ၎င်းတို့ကို mantelpiece ပေါ်တွင်အလယ်ဗဟိုတွင်ထားပါမင်းမဟုတ်ဘူးလား? သူတို့နဲ့တွဲပြီးပန်းအိုးဒါမှမဟုတ်ဆီမီးခုံတစ်စုံနဲ့ပန်းအိုးကိုထည့်နိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါအယူအဆများသည်ဘောင်တစ်ခုတည်းအတွက်အကျုံးဝင်သည်၊ သို့သော်မည်သို့ဖြစ်သနည်း ငါတို့ကလေးထောင့်ကွက်နှစ်ခုထားချင်တယ်? ပန်းချီကားများသည်၎င်းတို့နှစ် ဦး ၏ပုံတူများ (သို့) တူညီသောပန်းချီဆရာနှစ် ဦး ၏မတူညီသောရာသီများတွင်တူညီသောရှုခင်းများဖြစ်လျှင်မီးဖို၏တစ်ဖက်စီတွင်အလွန်ကောင်းလိမ့်မည်။ သူတို့ကဘာမှမပတ်သက်ဘူးဆိုရင်ပိုကြီးတဲ့နေရာမှာသေးငယ်တဲ့အရာကိုအနည်းငယ်တင်လိုက်ပါ။
နေရာ အတွင်းရေးမှူးတစ် ဦး ဒါမှမဟုတ်စပျစ်သီးပျဉ်ပြားစားပွဲတင်ပန်းချီကားတစ်ချပ်နဲ့မင်းနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ပုံစံကိုအားဖြည့်ပေးလိမ့်မယ်။ သူတို့ကစားပွဲခုံပေါ်မှီခိုတာကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကနေ့တိုင်းစားပွဲခုံကိုသုံးရင်အသက်သာဆုံးနည်းလမ်းတော့မဟုတ်ဘူး။ မင်းကမင်းကိုအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေချင်ရင်အဲဒါကိုဆွဲထားပါ၊ နံရံမှာချိတ်ဆွဲပါ။
သင်၏အိမ်၏ယခုထိမေ့နေသောထောင့်တစ်ခုကိုမီးမောင်းထိုးပြလိုပါသလား။ ရိုးရှင်းသော်လည်းတန်ဖိုးရှိသောပရိဘောဂများသည်အခြားသူများထက်ထူးခြားစေလိုပါသလား။ ဒီဆောင်းပါးရဲ့အစမှာငါတို့ပြောခဲ့သလိုခေတ်ဟောင်းပန်းချီကားတွေဟာအချို့ထောင့်တွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့စိတ်ကူးကောင်းတဲ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုပါ။
နံရံအလွတ်တစ်ခုပေါ်မှာပန်းချီကားတစ်ချပ်တင်ရင်ဒါဟာအာရုံစိုက်မှုရဲ့ဗဟိုဖြစ်လိမ့်မယ်။ ရိုးရှင်းသောပုံစံဖြင့်နံရံကိုပြုပြင်မယ့်အစားပိုလို့တောင်ကောင်းပါသေးတယ် မင်းအဲဒါကိုကြိုးနဲ့ဆွဲထားတယ် ဒုတိယပုံတွင်ကဲ့သို့ ပန်းချီကားများနှင့်ပြည့်နေသောနံရံသည်သတိမပြုမိပါ။ Minimalism နှင့် maximalism မင်းဘာကိုလောင်းလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ဆင်ယင်မွမ်းမံခြင်း » အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ » စတိုင်လ်ပန်းချီကားများဖြင့်သင်၏အိမ်ကိုအလှဆင်ရန်စိတ်ကူးများကိုသတိပြုပါ။
၄၀ နောက်ပိုင်းကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့သော့ချက် ၃ ချက်